Ase Nsɛnsin Da edzi
Bandwidth Akwan horow
Ɔfa Dza Ɔwɔ Mu no ho
Mormon Nwoma no ne Dzin Krataafa
Dɛm ntsi wɔdze Nephi no nkorɔfo ho abakɔsɛm nye Lamanfo so dze abɔmu etwitwa no ntsiatsia akyerɛw—Wɔkyerɛwee dze kɛmaa Lamanfo a wɔyɛ Israelfifo nkaa; nye Jewfo na Amanamamfo no mu biara so—Wɔnam mbrasɛm na nkɔnhyɛ sunsum nye nyikyerɛ kwan do kyerɛwee—Wɔkyerɛwee na wɔsɔɔw ano na wɔdze siei maa Ewuradze amma wɔannsɛɛ no—Ama wɔnam Nyankopɔn n’akyɛdze na no tum do woeyi epue na wɔakyerɛ ase—Moroni dze ne nsa sɔɔw ano na ɔdze siei maa Ewuradze, ama wɔnam Amanamamfo do woeyi epue wɔ n’aber ano—Wɔnam Nyankopɔn no tum akyɛdze do bɛkyerɛ ase.
Mormon Nwoma no yɛ kyerɛwsɛm krɔnkrɔn tse dɛ Bible so. Ɔyɛ kyerɛwsɛm a ɔfa mbrɛ Nyame sii nye tsetsemba a nna wɔtse America no nantsewee ho, daapem asɛmpa ne mãhyɛ no na ɔwɔ mu.
Nyimpa Baasa Hɔn Dasegye
Aman, ebusuafo, kasa horow na nyimpa nyinara a dɛm nsɛm yi bɛba hɔn hɔ no nhu dɛ: Yɛnam Nyame Egya na hɛn Ewuradze Jesus Christ adom do ehu dɛm mprɛtse a kyerɛwsɛm yi wɔan do no. Kyerɛwsɛm a ɔfa Nephi no nkorɔfo, na Lamanfo so a wɔyɛ hɔn nuanom, na Jared no nkorɔfo so a wofii abantsentsen no do sianee a wɔakã ho asɛm no. Na yenyim so dɛ wɔnam Nyankopɔn n’akyɛdze na no tum do kyerɛɛ ase, osiandɛ ne ndze na ɔada no edzi akyerɛ hɛn, dɛm ntsi yenyim pefee dɛ dɛm nsɛm yi yɛ nokwar. Na hɛn so yɛgye ho dase dɛ yehun nkrukye no a ɔwɔ mprɛtse no do no; na wɔnam Nyankopɔn no tum do yii kyerɛɛ hɛn, na nnyɛ nyimpa no tum do bi. Na yɛkã no wɔ botooyɛ mu dɛ Nyame no sor bɔfo fi sor sianee dze boguu hɛn enyim, na yɛhwɛe na yehun mprɛtse no na nkrukye a ɔwɔ do no; na yenyim dɛ ɔnam Nyame Egya, na hɛn Ewuradze Jesus Christ, adom do na yehunii na yɛgye dase dɛ dɛm ndzɛmba yi yɛ nokwar. Na ɔyɛ nwanwa wɔ hɛn enyi do. Naaso Ewuradze ne ndze hyɛɛ hɛn dɛ yɛngye ho dase, dɛm ntsi ama yɛayɛ setsie ama Nyankopɔn ne mbrasɛm no, yɛgye dɛm ndzɛmba yi ho dase. Na yenyim dɛ sɛ yedzi nokwar wɔ Christ mu a, yebeyi hɛn ntar efi adasamba nyinara hɔn bɔgyaa mu, na woennhu nkekaaba wɔ hɛnho wɔ Christ n’atsɛmbu egua no enyim, na yɛnye no atsena ase onnyiewiei mu wɔ sor. Na enyimnyam nkã Nyame Egya, nye Ɔba, nye Sunsum Krɔnkrɔn no a ɔyɛ Nyame kor no. Amen.
Nyimpa Baawɔtwe Hɔn Dasegye
Aman, ebusuafo, kasa horow na nyimpa nyinara a dɛm nsɛm yi bɛba hɔn hɔ no nhu dɛ: Joseph Smith, Kakraba, nyia ɔkyerɛɛ nsɛm yi ase no dze mprɛtse a wɔakã ho asɛm no akyerɛ hɛn, na mprɛtse no su tse dɛ sika, na no mu dodowara a dɛm Smith no kyerɛɛ ase no yɛdze hɛn nsa susuoo mu, na yehun nkrukye no so a ɔwɔ do no, na no do ndzɛmba nyinara yɛ tsetse edwindze, na ɔyɛ edwindze soronko. Na yɛdze botooyɛ gye iyi ho dase dɛ dɛm Smith no dze kyerɛɛ hɛn, na yehunii, na yɛbɔɔ no adze hwɛɛ na yenyim pefee dɛ dɛm Smith no ne nsa kãa mprɛtse no a yɛakã ho asɛm no. Na yɛdze hɛn edzin ma dze gye dase kyerɛ wiadze wɔ dza yeehu ho. Na yenndzi ator, Nyame gye ho dase.
Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith ne Dasegye
Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith nankasa n’anomusɛm a ɔfa mbrɛ Mormon Nwoma no sii bae ho:
Mormon Nwoma No ne Nkyerɛkyerɛmu Simabaa
Mormon Nwoma no yɛ kyerɛwsɛm krɔnkrɔn bi a ɔfa tsetseberdo nkorɔfo a nna wɔtse America ho na woekrukye egu kyɛnsẽ mprɛtse do. Dza odzi do yi kã fibea ahorow a wɔkyerɛɛw nwoma yi fi:
Nephi hyɛ ase kã no nkorɔfo ho nsɛm—Lehi hu ogyafadum wɔ enyido-adzehu mu na ɔkenkan fi nkɔnhyɛ nwoma mu—Oyi Nyame ayɛw, ɔkã Messiah ne mbaa ho asɛm, na ɔhyɛ nkɔm dɛ wɔbɛsɛɛ Jerusalem—Jewfo no tseetsee no. Bɛyɛ mfe 600 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi nye n’ebusua si mu kɔ sar no a ɔda Po Memen ne nkyɛn no do—Wogya hɔn egyapadze wɔ hɔ—Lehi bɔ afɔr ma Ewuradze na ɔkyerɛkyerɛ ne mbabanyin dɛ wondzi mbrasɛm no do—Laman na Lemuel hwinhwin hɔn egya—Nephi yɛ setsie na ɔbɔ mpaa wɔ gyedzi mu; Ewuradze kasa kyerɛ no, na wɔfa no dɛ ɔnhwɛ no nuanom no do. Bɛyɛ mfe 600 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi ne mbabanyin no san hɔn ekyir kɔ Jerusalem dɛ wɔrekɛfa ayewa mprɛtse no—Laban ammpɛ dɛ ɔdze mprɛtse no ma—Nephi kasa kyerɛ no nuanom no na ɔhyɛ hɔn nkuran—Laban wia hɔn egyapadze na ɔpɛ dɛ nkyɛ oku hɔn—Laman na Lemuel bobɔ Nephi na Sam na ɔbɔfo kã hɔn enyim. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi ku Laban dɛ mbrɛ Ewuradze hyɛ no no na ɔfa kwan bi do ma ne nsa kã ayewa mprɛtse no—Zoram pen dɛ ɔbɛkã Lehi n’ebusuafo no ho wɔ sar no do. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Sariah kasa tsia Lehi—Hɔn nyina dzi ehurusi wɔ hɔn mbabanyin no sanee no ho—Wɔbɔ afɔr—Moses na nkɔnhyɛfo no hɔn kyerɛwsɛm no wɔ ayewa mprɛtse no do—Mprɛtse no kyerɛ dɛ Lehi yɛ Joseph n’asenyi—Lehi hyɛ nkɔm wɔ n’asefo na mbrɛ wobesi akora mprɛtse no yie ho. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi kyerɛw ndzɛmba a ɔfa Nyankopɔn ho—Nephi no botae nye dɛ ɔbɛdan nkorɔfo ma wɔaba Abraham ne Nyankopɔn hɔ ma ɔagye hɔn nkwa. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi ne mbabanyin no san kɔ Jerusalem na wɔkɛfa Ishmael na ne fifo ma wɔbɛkã hɔnho wɔ hɔn akwantu mu—Laman na binom tsew etua—Nephi kasa kyerɛ no nuanom no dɛ wonya gyedzi wɔ Ewuradze mu—Wɔdze ntampehoma kyekyer no na wɔfa apam dɛ wɔbɛsɛɛ no—Gyedzi no tum yi no fi mu—No nuanom no serɛ bɔnfakyɛ—Lehi na no nkorɔfo bɔ afɔr nye ɔhyew afɔr. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi hu enyido-adzehu a ɔfa nkwadua no ho—Odzi n’eduaba no bi na ɔhwehwɛ dɛ n’ebusuafo so bɛyɛ dɛmara—Ohu dadze poma, ɔkwan a ɔyɛ nkekãnkekã na ɔyɛ tseaba, nye sum kebii etwa nyimpa ho ehyia—Sariah, Nephi na Sam dzi eduaba no bi, mbom Laman na Lemuel powee. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi yɛ mprɛtse ahorow ebien—Kor biara dzin dze Nephi ne mprɛtse—Hɔn wiadzedze ho abakɔsɛm na ɔwɔ mprɛtse akɛse no do; na nyamesom ho nkyekyeree so wɔ nkakraba no do. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi hyɛ nkɔm dɛ Babylonfo bɛfa Jewfo ndɔmmum—Ɔkã Messiah, Agyenkwa, Ɔpomfo no a obefi Jewfo mu epue no ho asɛm—Lehi kã nyia otwar dɛ onuma Nyame Eguambaa no so ne mbaa ho asɛm—Lehi kã Messiah no no wu na no wusoɛr ho asɛm—Ɔdze Israelmba a wɔbɔbɔ hɔn apetse na wɔbɛkã hɔn aboa ano no to ngodua ho—Nephi kã Nyankopɔn ne Ba, Sunsum Krɔnkrɔn n’akyɛdze, na mbrɛ tseneneeyɛ ho si hia ho asɛm. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi hu Ewuradze no Sunsum na onya nkwadua no ho enyido-adzehu—Ohu Nyankopɔn ne Ba no ne nã nye mbrɛ Nyankopɔn si kotow—Ohu Nyame Eguambaa no n’enuma, ne somdwumadzi na ne mbeamudua mu bɔ—Ohu Eguambaa no n’Asomafo Duebien no hɔn frɛ na hɔn som dwuma. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi hu enyido-adzehu wɔ anohoba asaase ho; ndzeyɛtsenenee, emumuyɛ, na no mu mba hɔn asehwe; Nyame Eguambaa no ne mbaa wɔ hɔn mu; kwan a Esuafo Duebien no nye Asomafo Duebien no bɛfa do ebu Israel atsɛn; mbrɛ hɔn a wɔbɔwodow wɔ gyedzi mu no hɔn efi fi dze gyinabew bɛyɛ. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi hu enyido-adzehu dɛ wɔakyekyer abɔnsam n’asɔr wɔ Amanamamfo no mu, America no mpuedo, Bible ne mbea bi a ɔyɛ pefee na ɔsom bo pii yew, amanamamfo no yew gyedzi, asɛmpa ne nkenyanee, da a odzi ekyir kyerɛwsɛm ne mbaa nye Zion ne nkyekyeree. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔbɔfo kã Amanamamfo no hɔn nhyira na hɔn ndom ho asɛm kyerɛ Nephi—Nsɔr ebien pɛr na ɔwɔ hɔ; Nyame Eguambaa no n’Asɔr na abɔnsam n’asɔr—Mbusu asɔr kɛse no tseetsee Nyankopɔn n’Ahotseweefo a wɔwɔ amanaman mu nyina. Ɔsomafo John bɛkyerɛw ndzɛmba bi a ɔfa wiadze n’ewiei ho. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi n’asefo nsa bɛkã asɛmpa no efi Amanamamfo no hɔ wɔ nda a aka ekyir no mu—Wɔdze Israel a wɔbɔboaboa hɔn ano no to ngodua no a wɔdze nankasa n’abaw no bɛsan abata noho bio no ho—Nephi kyerɛ enyido-adzehu a ɔfa nkwadua ho no ase na ɔkã Nyankopɔn ne pɛrpɛr a odzi dɛ ɔtsew emumuyɛfo fi atseneneefo ho no ho asɛm. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Emumuyɛfo no fa nokwar no dɛ ɔyɛ dzen—Lehi ne mbabanyin no warwar Ishmael ne mbabaa—Liahona kyerɛ hɔn kwan wɔ sar no do—Wɔkyerɛw nsɛm a ofi Ewuradze hɔ wɔ Liahona no do ofi ber to ber—Ishmael wu, osian amandzehu ntsi n’ebusuafo hwinhwini. Bɛyɛ mfe 600–592 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔhyɛ Nephi dɛ ɔmpam hɛn—No nuanom tsia no—Ɔkã abakɔsɛm a ɔfa mbrɛ Nyankopɔn si nye Israel nantsew kyerɛ hɔn dze tu hɔn fo—Nyankopɔn no tum hyɛ Nephi mã—Wɔbɔ no nuanom no kɔkɔ dɛ mma wɔmmfa hɔn nsa nnkã no, annyɛ dɛm a wɔbɛkyenkyen dɛ ahaban wui. Bɛyɛ mfe 592–591 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wowie hɛn no pam—Wɔkã Jacob na Joseph hɔn awo ho nsɛm—Dɔm no si mu dɛ wɔrokɔ anohoba asaase no do—Ishmael ne mbabanyin nye hɔn yernom no kã ho ma wodzi ehurusi na wɔtsew etua—Wɔkyekyer Nephi, na ehum kɛse bi tu na ɔbɔ hɛn no san ekyir—Wosian Nephi, na ɔnam ne mpaabɔ do ma ehum no gyaa tu—Nkorɔfo no du anohoba asaase no do. Bɛyɛ mfe 591–589 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi dze ɔbotan bi yɛ mprɛtse na ɔkyerɛw no nkorɔfo hɔnho abakɔsɛm wɔ do—Israel Nyankopɔn bɛba mfe ahaesia fitsi aber a Lehi fii Jerusalem no—Nephi kã n’amandzehu na ne mbeamudua mu bɔ ho asɛm—Wɔbɔpow Jewfo na wɔabɔ hɔn apetse ekodu nda a aka ekyir no, aber no na wɔbɛsan aba Ewuradze nkyɛn. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ewuradze da No nsusui edzi kyerɛ Israel—Woeyi Israel efi ahohiahia fononoo mu na wobefi Babylon efi—Fa to Isaiah 48 ho. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Messiah bɛyɛ kan ama Amanamamfo na obeyi hɔn a wogugu efiadze—Wɔdze tum bɛkã Israel aboa ano wɔ nda a odzi ekyir no mu—Ahemfo bɛyɛ egyanom a wɔgyegye mba—Fa to Isaiah 49 ho. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔbɔbɔ Israel apetse wɔ asaase nyinara enyi—Amanamamfo no dze asɛmpa no bɛnyɛn Israel wɔ nda a odzi ekyir no mu—Wɔbɛkã Israel aboa ano na wɔagye hɔn, na emumuyɛfo bɛhyew dɛ nwura—Wɔbɛsɛɛ abɔnsam n’ahenman, na wɔakyekyer Satan. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi hyɛ ahotɔ asaase ho nkɔm—Sɛ wɔpow Israel Krɔnkrɔnnyi no a wɔbɔbɔ n’asefo apetse na woetwa hɔn akyen—Ɔhyɛ ne mbabanyin no nkuran dɛ wɔmfa tsenenee akokyɛm no nhyɛ. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔpon nam Messiah Krɔnkrɔn no mu ba—Wɔdze obi ne pɛ bɛhyɛ ne nsa no yɛ adze a no ho hia kɛse wɔ asetsena na mpontu mu—Adam hwee ase ama nyimpa aabɛtse ase—Nyimpa wɔ kwan dɛ wɔfa ahotɔ na onnyiewiei nkwa. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ber a Joseph wɔ Egypt no, ohun Nephifo no wɔ enyido-adzehu mu—Ɔhyɛɛ Joseph Smith, adzehunyi a ɔwɔ nda a aka ekyir mu nye Moses, nyia ɔbɛgye Israel; na Mormon Nwoma no mpuei ho nkɔm. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi tu n’asefo no fo na ohyira hɔn—Owu na wosie no—Nephi tuw noho wɔ Nyame ne papayɛ ho—Nephi dze no werɛ hyɛ Ewuradze mu afebɔɔ. Bɛyɛ mfe 588–570 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephifo tsew hɔnho fi Lamanfo ho, wodzi Moses mbra no do na wosi temple—Osian Lamanfo no hɔn ekyingye ntsi woetwa hɔn efi Ewuradze n’enyim akyen, na wɔpaa hɔn, na wɔabɛyɛ abaa dze ama Nephifo. Bɛyɛ mfe 588–559 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob san kã Jewfo ho abakɔsɛm: Hɔn ndɔmmum mu kɔ wɔ Babylon na hɔn nsanee; Na Israel Krɔnkrɔnnyi no ne somdwuma no na mbeamudua mu bɔ; mboa a nsa kãa fii Amanamamfo hɔ; nye mbrɛ ɔbɛyɛ ma sɛ Jewfo no gye Messiah dzi a, ekyir no wobenya nkenyan. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob kɔ do kenkan fi Isaiah nwoma mu: Isaiah dze Messiah sunsum kasa—Messiah benya nwomahunyi ne tɛkyerɛma—Ɔdze N’ekyir bɛma mbaahwefo—N’enyim runngu ase—Fa to Isaiah 50 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob kɔ do kenkan fi Isaiah nwoma mu: Ewuradze bɛkyekye Zion no werɛ na ɔakã Israel aboa ano wɔ nda a odzi ekyir no mu—Hɔn a wɔapon hɔn no dze ehurusi bɛba Zion—Fato Isaiah 51 na 52:1–2 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob kyerɛkyerɛmu dɛ Ɔbɛkã Jewfo no aboa ano wɔ hɔn asaase a wɔdze bɔɔ hɔn anohoba no nyina do—Werdambɔ gye adasa fi Asehwe mu—Ewufo hɔn nyimpadua befi owumaa mu epue, na hɔn esunsum so efi hɛl na paradise—Wobobu hɔn atsɛn—Werdambɔ gye nyimpa fi owu, hɛl, abɔnsam na ahohyehye a onnyi ewiei mu—Wɔbɛgye atseneneefo nkwa wɔ Nyame n’ahenman mu—Wɔada bɔn ho asotwe edzi—Israel Krɔnkrɔnnyi no nye abow no no hwɛdofo. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob kyerɛkyerɛmu dɛ Jewfo no bɔbɔ hɔn Nyankopɔn mbeamudua mu—Wɔbɔbɔ hɔn apetse ekodu dɛ wɔbɛhyɛ ase agye No edzi—America bɛyɛ ahotɔ asaase, bea a ɔhen biara ronnhwɛ do—San nye Nyankopɔn mbɔmu na dua N’adom do nya nkwagye. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob hun no Pomfo—Moses Mbra kyerɛ Christ Ne fasusu su na osi no pi dɛ ɔbɛba. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Isaiah hu da a odzi ekyir temple no, Israel no mboano, na mfe apem atsɛmbu na asomdwee—Wɔbɛbrɛ hɔn a wɔyɛ ahopɔw na ewurkadze adze wɔ Edwuradze ne mbae a Otsĩa Ebien no mu—Fa to Isaiah 2 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔbɔtwe Judah na Jerusalem hɔn aso wɔ hɔn asokyew ho—Ewuradze serɛ ma na obu No nkorɔfo atsɛn—Wɔadom Zion mbabaa wɔ hɔn ahopɛ ho—Fa to Isaiah 3 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔbɔpon Zion na ne mbabaa na wɔatsew hɔnho wɔ mfe apem da no mu—Fa to Isaiah 4 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ewuradze No wenyin ture (Israel) bɛyɛ ɔmamfo na wɔbɔbɔ no mu mba apetse—Ndom bɛba hɔn do wɔ hɔn gyedzi asehwe mu na wɔabɔ hɔn apetse no—Ewuradze bɛma frankaa do na ɔakã Israel aboa ano—Fa to Isaiah 5 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Isaiah hu Ewuradze—Wɔdze Isaiah no bɔn kyɛ no—Wɔfrɛ no dɛ ɔnkɛhyɛ nkɔm—Ɔhyɛ Christ ne nkyerɛkyerɛ a Jewfo no bɔpow ho nkɔm—Nkaasefo bi bɛsan aba—Fa to Isaiah 6 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ephraim na Syria tu Judah do sa—Ɔbaabun bɔwo Christ—Fa to Isaiah 7 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Christ bɛyɛ fintsidua nye mfom bo—Hwehwɛ Ewuradze, na nnyɛ esumamfo—Dan Kɔ mbra ɔnye adasesɛm no ho na kenya bambɔ—Fa to Isaiah 8 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Isaiah kã Messiah ho asɛm—Nkorɔfo a wɔnantsew sum mu no bohu kan kɛse—Wɔawo ɔba ama hɛn—Wɔbɛfrɛ no Asomdwee Hen na obedzi hen wɔ David n’ahengua do—Fa to Isaiah 9 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Assyria ne nsɛɛe tse dɛ Mbrɛ wobesi asɛɛ emumuyɛfo wɔ Mbaa a Otsĩa Ebien no mu—Ewuradze ba bio a, ekyir no nyimpa kumaabi na wɔbɛka—Jacob n’asefo bɛsan wɔ da no mu—Fa to Isaiah 10 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jesse no dusin (Christ) bobu atsɛn tsenenee—Nyankopɔn ho nyimdzee bɛkata asaase do wɔ Mfe Apem no mu—Ewuradze bɛma frankaa do na ɔakã Israel aboa ano—Fa to Isaiah 11 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nyimpa nyina beyi Ewuradze ayɛw wɔ Mfe Apem da no mu—Ɔbɛtsena hɔn mu—Fa to Isaiah 12 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mbrɛ wobesi asɛɛ adze wɔ Mbaa a Otsĩa Ebien no mu tse dɛ Babylon ne nsɛɛe—Ɔbɛyɛ ebufuhyew na ntsea da—Babylon (wiadze) bɔhwe ase afebɔɔ—Fa to Isaiah 13 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔbɛkã Israel aboa ano na oenya Mfe Apem ahomgye—Wɔbɛpam Lucifer efi sor wɔ etuatsew ntsi—Israel bedzi ehurusi wɔ Babylon (wiadze) do—Fa to Isaiah 14 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi dzi dɛw wɔ pefeeyɛ mu—Wɔbɛtse Isaiah no nkɔnhyɛ no ase wɔ nda a aka ekyir no mu—Jewfo no befi Babylon asan aba, abɔbɔ Messiah mbeamudua mu, na wɔbɔbɔ hɔn apetse na wɔatsẽa hɔn—Sɛ wɔgye Messiah no dzi a, wɔbɛsan agye hɔn—Lehi efi Jerusalem mfe ahaesia ekyir no obedzi kan aba—Nephifo dzi Moses Mbra no do na wɔgye Christ, Israel Krɔnkrɔnnyi no dzi. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Christ bɔsoom Nephifo no—Nephi dzi kan hu no nkorɔfo no hɔn nsɛɛe—Wɔbɛkasa efi huntuma mu—Amanamamfo besisi ator nsɔrbansɔrba na wɔatsetsew nsumaamu fɛkuw—Ewuradze bra nyimpa wɔ asɔfoɔtorsom ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Sum nye gyedzi ho asehwe bɛba asaase do wɔ nda a odzi ewiei no mu—Wɔdze Mormon Nwoma no bopue—Nyimpa baasa bɛgye nwoma no ho dase—Nwomanyimfo bekã dɛ onnkotum akenkan nwoma a wɔasɔw ano no—Ewuradze bɛyɛ ndwuma a ɔyɛ nwanwa na ahobow—Fa to Isaiah 29 ho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wobesisi ator nsɔrbansɔrba pii wɔ nda a odzi ewiei no mu—Wɔbɛma ator nkyerɛkyerɛ na nkyerɛkyerɛ hun na nkwasea nkyerɛkyerɛ—Osian ator nkyerɛkyerɛ ntsi gyedzi ho asehwe bɛba—Abɔnsam bonunu nyimpa n’akoma mu—Ɔbɛfa ator kwan biara do akyerɛkyerɛ. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔbɛkan Amanamamfo a wɔasakyer no akã ahyɛmu mba noho—Lamanfo na Jewfo pii bɛgye asɛm no edzi na wɔabɛyɛ nkorɔfo a hɔnho yɛ enyika—Wɔbɛsan agye Israel na wɔasɛɛ emumuyɛfo. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi kã siantsir a ɔnam do a wonumaa Christ—Ɔwɔ dɛ adasamba kã Christ do, wonuma hɔn, hɔn nsa kã Sunsum Krɔnkrɔn no, na wotsim kodu ewiei ma wɔgye hɔn nkwa—Nnuho na enuma nye kwan a ɔtsen na ɔyɛ tseaba no n’abow—Onnyiewiei nkwa wɔ hɔ ma hɔn a woenuma hɔn ekyir no wodzi mbrasɛm no do. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Abɔfo nam Sunsum Krɔnkrɔn no tum do kasa—Ɔwɔ dɛ nyimpa bɔ mpaa na wodua Sunsum Krɔnkrɔn no do nya nyimdzee dze ma hɔnho. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi ne nsɛm yɛ nokwar—Wɔgye Christ noho dase—Hɔn a wɔgye Christ dzi no bɛgye Nephi ne nsɛm edzi, obegyina hɔ dɛ dasegye wɔ atsɛmbu egua no enyim. Bɛyɛ mfe 559–545 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob na Joseph per dɛ wɔbɛma nkorɔfo enya gyedzi wɔ Christ mu na woedzi Ne mbrasɛm do—Nephi wu—Emumuyɛdze soɛr wɔ Nephifo mu. Bɛyɛ mfe 544–421 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob kasa tsia ahonyadze no dɔ ho, ahantanyɛ na efĩfĩdze—Nyimpa botum ahwehwɛ ahonyadze dze aboa no nuanom—Ewuradze hyɛ dɛ mma ɔbanyin biara a ɔwɔ Nephifo mu no nnya nyernom mmbor kor—Ewuradze rohwehwe ahosie wɔ mbasiafo ho. Bɛyɛ mfe 544–421 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nkorɔfo a hɔn akoma mu tsew no hɔn nsa kã Nyankopɔn n’asɛmpa no—Lamanfo yɛ atseneneefo sen Nephifo—Jacob bɔ ndwamanbɔ, akɔndɔ bɔn na bɔn ahorow ho kɔkɔ. Bɛyɛ mfe 544–421 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nkɔnhyɛfo no nyina nam Jesus dzin mu soom Egya no—Abraham n’afɔr a nna ɔdze Isaac robɔ no tse dɛ Nyankopɔn na nyia Ɔwoo no Kortoo no no mae—Nyimpa wɔ dɛ odua Werdambɔ no do nye Nyankopɔn san bɔ mu—Jewfo bɔpow kutuwdo bo no. Bɛyɛ mfe 544–521 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Jacob dze Zenos ne nsɛm no to ngodua pa na kwaamu ngodua ho—Wɔtse dɛ Israel na Amanamamfo—Wɔakã Israel a wɔbɔbɔ hɔn apetse na wɔakã hɔn aboa ano ho asɛm dada—Wɔkasa fa Nephifo na Lamanfo na Israel fifo nyina wɔ abɛbu mu—Wɔdze Amanamamfo bɛbata Israel ho—Ekyir no wɔbɛhyew wenyin ture no. Bɛyɛ mfe 544–421 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nda a odzi ekyir no Ewuradze bɛsan afrɛ Israel—Wɔdze gya bɛhyew wiadze—Ɔwɔ dɛ nyimpa kã Christ do amma wɔannkɔ ogya baka na brimstone no mu. Bɛyɛ mfe 544–421 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Sherem pow Christ, ɔnye Jacob fimfɛn, ɔhwehwɛ sɛnkyerɛdze na Nyankopɔn twa no—Nkɔnhyɛfo no nyina akã Christ na No Werdambɔ no ho asɛm—Nephifo hɔn nda nyina mu no wɔbɛyɛɛ ekyimafo, wɔwoo hɔn abɛbrɛsɛ mu, na Lamanfo tan hon. Bɛyɛ mfe 544–421 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Enos bɔ mpaa dzendzenndzen na onya bɔnfakyɛ—Ewuradze ne ndze ba n’adwen mu dɛ ɔrobɔ no anohoba dɛ Lamanfo benya nkwagye ndaamba—Nephifo per dɛ wɔbɛsan atwe Lamanfo no ekyir—Enos dzi ehurusi wɔ no Pomfo mu. Bɛyɛ mfe 420 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephifo dzi Moses mbra do, wɔhwɛ Christ ne mbaa kwan, na wɔyɛ prɔmprɔm wɔ asaase no do—Nkɔnhyɛfo pii bɔ mbɔdzen dɛ wɔdze nkorɔfo no bɛfa nokwar kwan no mu. Bɛyɛ mfe 399–361 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Omni, Amaron, Chemish, Abinadom na Amaleki hɔn mu biara a obedzi adze no dze nkyerɛwee no sie—Mosiah pue Zarahemlafo no a wofi Jerusalem bae wɔ Zedekiah n’aber do no do—Wɔhyɛ Mosiah ɔhen wɔ hɔn do—Mulek n’asefo a wɔwɔ Zarahemla no kopuei Coriantumr do Mulekfo ekopue Coriantumr, Jaredfo hɔn nkaekyir no do—Ɔhen Benjamin dzi Mosiah n’adze—Ɔwɔ dɛ nyimpa tu ne kra si hɔ dɛ afɔrbɔdze dze ma Christ. Bɛyɛ mfe 323–130 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mormon twitwa Nephi ne mprɛtse akɛse no do ntsiantsia—Ɔdze mprɛtse nkakraba no kãa mprɛtse nkaa no ho—Ɔhen Benjamin hwɛ ma asomdwee ba asaase no do. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 385.
Ɔhen Benjamin kyerɛkyerɛ ne mbabanyin no hɔn egyanom hɔn kasaa na nkɔnhyɛsɛm—Hɔn kyerɛwsɛm a ɔwɔ mprɛtse horow no do no ama woeetum akora hɔn nyamesom na hɔn enyibue do—Wɔhyɛ Mosiah ɔhen na wɔdze kyerɛwsɛm nye ndzɛmba bi so ma no esie. Bɛyɛ mfe 130–124 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔhen Benjamin kasa kyerɛ no nkorɔfo—Ɔkã ne pɛrpɛrdzi, ayamuyie na ne nyamesu wɔ n’ahendzi ber mu ho asɛm—Otu hɔn fo dɛ wɔnsom hɔn Sor Hen—Hɔn a wɔtsew Nyame do etua no bohu amandze tse dɛ ogya a onndum da mu. Bɛyɛ mfe 124 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔhen Benjamin sɔw ne kasaa do—Ewuradze Tumfo bɔsom adasa mu wɔ dɛtse honandua mu—Bɔgya befi no honandua no tokur biara mu egu wɔ ber a Ɔrobɔ werdam dze ama wiadze bɔn no—Ne dzin nko mu na nkwagye nam ba—Adasa botum nam no Werdambɔ no do eyi honammunyi no efi ma wɔabɛyɛ Ahotseweefo—Emumuyɛfo hɔn ahohyehye bɛyɛ dɛ ogya baka na brimstone. Bɛyɛ mfe 124 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔhen Benjamin sɔw ne kasaa do—Osian Werdambɔ no ntsi na nkwagye ba—Gye Nyame dzi ma wɔngye wo nkwa—Nya gyedzi a otsim ama akɔdo enya bɔnfakyɛ—Fa w’ahodze ma ehiafo—Yɛ ndzɛmba nyina wɔ nyansa nye kwan pa do. Bɛyɛ mfe 124 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ahotseweefo no nam gyedzi do bɛyɛ Christ ne mbabanyin na mbabaa—Afei wɔdze Christ ne dzin frɛ hɔn—Ɔhen Benjamin kyerɛkyerɛ hɔn dɛ wongyina pintsinn na mma wonnhihim wɔ ndwuma pa ne yɛ mu. Bɛyɛ mfe 124 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔhen Benjamin kyerɛw nkorɔfo no edzin na oyi asɔfo dɛ wɔnkyerɛkyerɛ hɔn—Mosiah bɛyɛ ɔhen tseneneenyi. Bɛyɛ mfe 124–121 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ammon kohu Lehi-Nephi asaase no a Limhi yɛ ɔhen wɔ do no—Limhi no nkorɔfo yɛ Lamanfo hɔn nkowaa—Limhi san kã hɔn abakɔsɛm—Nkɔnhyɛnyi (Abinadi) agye dase dɛ Christ nye Nyame na adze nyinara Egya—Hɔn a wodua efĩfĩdze no bobu ekyinehyia-mframa, na hɔn a wɔdze hɔn werɛ hyɛ Ewuradze mu no wɔbɛgye hɔn. Bɛyɛ mfe 121 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ammon kyerɛkyerɛ Limhifo no—Osũa nsɛm a ɔwɔ Jaredfo mprɛtse eduonu anan do no—Adzehufo na wotum kyerɛ nsɛm a ɔwɔ tsetse mprɛtse do ase—Akyɛdze biara nnyi hɔ a ɔso sen nyia ɔyɛ adzehufo. Bɛyɛ mfe 121 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Zeniff dzi dɔm bi a wofi Zarahemla enyim dɛ wɔrekɛgye Lehi-Nephi asaase no—Lamanfo hɔn hen ma hɔn kwan dɛ wɔmfa—Ɔkõ si Lamanfo na Zeniff no nkorɔfo no ntamu. Bɛyɛ mfe 200–187 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔhen Laman wu—No nkorɔfo no yɛ abɔyafo na wɔpɛ bɔgya na wɔgye ator amambra dzi—Zeniff na no nkorɔfo dzi hɔn do konyim. Bɛyɛ mfe 187–160 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔhen Noah dzi hen wɔ etsirmɔdzen mu—Ɔnye ne yernom na no nwewefo gye hɔn enyi wɔ asakasakabra bɔ mu—Abinadi hyɛ nkɔm dɛ wɔbɛfa nkorɔfo no akɔ nkowaasom mu—Ɔhen Noah hwehwɛ dɛ oboku no. Bɛyɛ mfe 160–150 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔnam nkɔm a Abinadi hyɛ wɔ nkorɔfo no hɔn nsɛɛe na ɔhen Noah no wu ho ntsi, wɔdze no to efiadze—Asɔfo atorfo no san si kyerɛwsɛm no do na wɔyɛ dɛ gyama wodzi Moses ne mbra no do—Abinadi hyɛ ase kyerɛkyerɛ hɔn Mbra Du no. Bɛyɛ mfe 148 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Tum a ofi sor bɔ Abinadi ho ban—Ɔkyerɛkyerɛ Mbra Du no—Nnyɛ Moses mbra no nko mu na nkwagye fi ba—Nyankopɔn Nankasa dze Noho bɛyɛ werdambɔ na Ɔapon No nkorɔfo. Bɛyɛ mfe 148 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Isaiah kã Messiah ho asɛm—Wɔda Messiah a wɔbrɛɛ no adze no na n’amandzehu edzi—Ɔdze Ne kra bɔ afɔr ma bɔn na ɔyɛ ntamugyinafo ma mbratofo—Fa to Isaiah 53 ho. Bɛyɛ mfe 148 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mbrɛ Christ si yɛ Egya nye Ɔba no nyina—Ɔbɛyɛ ntamugyinafo na Ɔasoa No nkorɔfo hɔn mbrato—Hɔn nye nkɔnhyɛfo krɔnkrɔn no nyina yɛ N’asefo—Ɔdze Owusoɛr ba—Mbofra nkakraba wɔ onnyiewiei nkwa. Bɛyɛ mfe 148 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nyankopɔn pon nyimpa fi hɔn yew na asehwe tsebew mu—Hɔn a wɔwɔ wiadze su no gyina hɔn ananmu tse dɛ mbrɛ ɔpon bi nnyi hɔ—Christ dze owusoɛr ba dze ma nkwa a onnyi ewiei anaa dze ma afɔbu a onnyi ewiei. Bɛyɛ mfe 148 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma gye dzi na ɔkyerɛw Abinadi ne nsɛm no—Abinadi wu wɔ ogya mu—Ɔhyɛ nkɔm dɛ hɔn a woruku no no bɛyar na wobodua ogya mu ewu. Bɛyɛ mfe 148 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma kã nyamesɛm wɔ kokoa mu—Ɔdze enuma ahyɛmudzi no to gua na onuma binom wɔ Mormon esu mu—Ɔkyekyer Christ N’Asɔr na ɔhyɛ asɔfo—Wɔyɛ pampam suomu na wɔkyerɛkyerɛ nkorɔfo no—Alma na no nkorɔfo guan fi ɔhen Noah nsa kɔ sar no do. Bɛyɛ mfe 147–145 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Gideon per dɛ oboku ɔhen Noah—Lamanfo kyer nsera wɔ asaase no do—Ɔhen Noah wu wɔ ogya mu—Limhi dzi hen a otua tow. Bɛyɛ mfe 145–121 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Noah n’asɔfoe kɛkyekyer Laman mbabaa no bi guan—Lamanfo tu hɔn nsordaafo ma wɔkɔ Limhi na no nkorɔfo do dɛ wɔnye hɔn rokɔkõ—Wɔbɔ Laman nsordaafo gu na wɔpata hɔn. Bɛyɛ mfe 145–123 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamanfo hwe Limhi no nkorɔfo na wodzi hɔn do konyim—Limhifo hyia Ammon na ɔsakyer hɔn—Wɔkã Jaredfo mprɛtse eduonu anan no ho asɛm kyerɛ Ammon. Bɛyɛ mfe 122–121 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔyɛ nhyehyɛɛ a nkorɔfo no botum edua do eguan efi Laman nkowaasom mu—Wɔma Lamanfo nom nsã bobow—Nkorɔfo no guan, san kɔ Zarahemla na wɔbɔsom Ɔhen Mosiah. Bɛyɛ mfe 121–120 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma pow dɛ obedzi hen—Ɔsom dɛ ɔsɔfopanyin—Ewuradze tsẽa No nkorɔfo, na Lamanfo dzi Helam asaase do konyim—Amulon, Ɔhen Noah n’asɔfoe etsiɔdzenfo no ne kandzifo bɛhyɛ Laman ahentum ase dzi hen. Bɛyɛ mfe 145–121 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Amulon tseetsee Alma na no nkorɔfo—Sɛ wɔbɔ mpaa a woboku hɔn—Ewuradze yɛ ma hɔn adzesoa yɛ har—Oyi hɔn fi nkowaasom mu na wɔsan kɔ Zarahemla. Bɛyɛ mfe 145–120 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mulek n’asefo a wɔwɔ Zarahemla no bɛyɛ Nephifo—Wɔtse Alma na Zeniff hɔn nkorɔfo ho nsɛm—Alma numa Limhi na no nkorɔfo nyina—Mosiah ma Alma tumdzi dɛ ɔnkyekyer Nyankopɔn N’Asɔr no. Bɛyɛ mfe 120 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ekyingyefo gya Asɔrmba no pii kɔ bɔn mu—Wɔdze onnyiewiei nkwa bɔ Alma anohoba—Hɔn a wonu hɔnho na wonuma hɔn no wonya bɔnfakyɛ—Asɔrmba ndzebɔnyɛfo a wonu hɔnho na wɔkã hɔn bɔn kyerɛ Alma nye Ewuradze no benya bɔnfakyɛ; annyɛ dɛm a, wɔrennkan hɔn nka asɔrmba ho. Bɛyɛ mfe 120–100 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mosiah bra atseetsee na ɔkã pɛryɛ ho asɛm—Alma kakraba na Mosiah ne mbabanyin baanan no per dɛ wɔbɛsɛɛ Asɔr no—Ɔbɔfo yi noho kyerɛ hɔn na ɔhyɛ hɔn dɛ wongyaa hɔn kwan bɔn a wɔnam do no—Alma tɔ mmum—Ɔwɔ dɛ wɔwo adasamba nyina fofor ama woenya nkwagye—Alma na Mosiah ne mbabanyin no bɔ enyigyesɛm ho dawur. Bɛyɛ mfe 100–92 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mosiah ne mbabanyin no kɛkã asɛmpa no kyerɛ Lamanfo no—Mosiah dua adzehudze abo ebien a no do kyerɛ nsɛm a ɔwɔ Jaredfo hɔn mprɛtse do no ase. Bɛyɛ mfe 92 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mosiah kã to gua dɛ wɔmfa atsɛmbuafo nhyɛ ahemfo ananmu—Ahemfo bɔn gya hɔn nkorɔfo kɔ bɔn mu—Nkorɔfo no yi Alma kakraba ma ɔbɛyɛ ɔtsɛmbuafo panyin—Ɔnoara so nye sɔfopanyin a ɔhwɛ Asɔr no do—Alma panyin na Mosiah wu. Bɛyɛ mfe 92–91 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nehor ma ator nkyerɛkyerɛ, ɔkyekyer asɔr, ɔhyɛ asɔfoɔtorsom ase, na oku Gideon—Woku Nehor wɔ n’ewudzi ho—Asɔfoɔtorsom nkyerɛkyerɛ na atseetsee petse nkorɔfo no mu—Asɔfo no yɛ pampam suo mu, nkorɔfo no hwɛ ehiafo, na Asɔr no yɛ prɔmprɔm. Bɛyɛ mfe 91–88 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Amlici per dɛ obedzi hen na dɔm no ammpen do—N’akãdofo hyɛ no ɔhen—Amlicifo tu Nephifo do sa na wodzi ɔkogu—Lamanfo na Amlicifo kã hɔn nsordaafo bɔmu na wodzi ɔkogu—Alma ku Amlici. Bɛyɛ mfe 87 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Amlicifo hyɛ hɔnho nsew dɛ mbrɛ nkɔnhyɛsɛm se—Ndom akã Lamanfo wɔ hɔn etuatsew ntsi—Nyimpa hɔnara wɔdze ndom ba hɔn do—Nephifo dzi Laman nsordaafo binom so do konyim. Bɛyɛ mfe 87–86 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma numa nyimpa mpempem a wɔasakyer—Emumuyɛ hɛn Asɔr no mu, na Asɔr no no mpontu brɛ adze—Woyi Nephihah ma ɔbɛyɛ ɔtsɛmbuafo panyin—Alma, dɛ ɔyɛ sɔfopanyin no, tu noho si hɔ yɛ ɔsomdwuma no. Bɛyɛ mfe 86–83 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ansaana adasamba benya nkwagye no, ɔwɔ dɛ wonu hɔnho na wodzi mbrasɛm no do, wɔwo hɔn fofor, wɔhor hɔn ntar wɔ Christ no bɔgyaa no mu, wɔyɛ ahobrɛadze na woyi ahantanyɛ na enyitan akwa na wɔyɛ ndwuma a ɔtsen—Oguanhwɛfo Pa no frɛ No nkorɔfo—Hɔn a wɔyɛ ndwuma bɔn no yɛ abɔnsam mba—Alma gye dase dɛ ne nkyerɛkyerɛ no yɛ nokwar na ɔhyɛ adasamba dɛ wonnu hɔnho—Wɔbɛkyerɛw atseneneefo no hɔn edzin wɔ nkwa nwoma no mu. Bɛyɛ mfe 83 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔtsew Asɔr a ɔwɔ Zarahemla no ho na wɔhyehyɛ no mu dwumadzi no yie—Alma kɔ Gideon kɛkã asɛmpa no. Bɛyɛ mfe 83 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mary na ɔbɔwo Christ—Obobubu owu mpokyerɛ mu na Ɔasoa No nkorɔfo hɔn bɔn—Hɔn a wonu hɔnho, wonuma hɔn, na wodzi mbrasɛm no do no benya onnyiewiei nkwa—Efĩfĩdze runntum nntsena Nyankopɔn ahenman mu—Ahobrɛadze, gyedzi, enyidado, na ayamuyie na wohia. Bɛyɛ mfe 83 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma kã asɛmpa na onuma wɔ Melek—Wɔpow no wɔ Ammonihah na ofi hɔ—Ɔbɔfo hyɛ no dɛ ɔnsan na ɔnkɔbɔ nnuho ho dawur nkyerɛ nkorɔfo no—Amulek gye no, na hɔn beenu kã nsɛmpa wɔ Ammonihah. Bɛyɛ mfe 82 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma hyɛ nkorɔfo a wɔwɔ Ammonihah dɛ wonnu hɔnho—Ewuradze bohu Lamanfo mbɔbɔr wɔ nda a odzi ekyir no mu—Sɛ Nephifo pow kan no a, Lamanfo bɛsɛɛ hɔn—Nyankopɔn ne Ba no reba ntsɛm—Ɔbɔpon hɔn a wonu hɔnho na wonuma hɔn na wonya gyedzi wɔ Ne dzin mu. Bɛyɛ mfe 82 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lehi yɛ Manasseh n’asenyi—Amulek kaa ɔbɔfo n’ahyɛdze dɛ ɔnhwɛ Alma do no—Atseneneefo hɔn mpaabɔ ma wɔgye dɔm no—Mbranyimfo nye atsɛmbuafo a wɔnntsen a bɔ fapem to hɔ ma dɔm no hɔn nsɛe. Bɛyɛ mfe 82 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔkyerɛkyerɛ Nephifo sika mu—Amulek nye Zeezrom fimfɛn—Christ renngye nkorɔfo nkwa wɔ hɔn bɔn mu—Hɔn a wobenya sor ahenman no edzi nko na wɔbɛgye hɔn nkwa—Nyimpa nyina dze bɛkyebo honandua bɔsoɛr—Owu biara nnyi Owusoɛr ekyir. Bɛyɛ mfe 82 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma kasa kyerɛ Zeezrom—Wobotum eyi Nyame n’esumasɛm no akyerɛ agyedzifo nko—Wobodua dza nyimpa dwen, gye dzi, nsɛm na ndwuma do ebu hɔn atsɛn—Emumuyɛfo bowu sunsum mu wu—Dɛm asetsena a ɔnnkye bo a yɛwɔ mu yi yɛ nsɔhwɛber tsebew—Ɔpon ho nhyehyɛɛ no dze owusoɛr ba, na wɔnam gyedzi do nya bɔnfakyɛ—Wɔnam Ɔba a Wɔwoo no Kortoo no no do bohu nyia oenu noho no mbɔbɔr. Bɛyɛ mfe 82 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔnam mbarimba hɔn gyedzi kɛse nye hɔn ndwuma pa do frɛ hɔn ma wɔbɛyɛ asɔfo mpanyin—Ɔwɔ dɛ wɔkyerɛkyerɛ mbrasɛm no—Wɔnam ndzeyɛtsenenee do wɔtsew hɔnho na wɔhɛn Ewuradze n’ahomgye mu—Melchizedek yɛ hɔn mu kor—Abɔfo robɔ enyigyesɛm no dawur wɔ asaase nyina do—Wɔbɛda Christ ne mbae ankasa edzi. Bɛyɛ mfe 82 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔdze Alma na Amulek gu efiadze na wɔhwe hɔn—Wɔdze gya hyew agyedzifo no nye hɔn kyerɛwsɛm krɔnkrɔn no—Ewuradze gye dɛm nkorɔfo yi a wokunkum hɔn wɔ hɔn gyedzi ho no wɔ enyimnyam mu—Efiadze afasu no mu paa na odwuruw gu famu—Wɔgye Alma na Amulek na woku hɔn atseetseefo no. Bɛyɛ mfe 82–81 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma na Amulek kɔ Sidom na wɔkyekyer asɔr—Alma sa Zeezrom yarba na ɔbɛkã Asɔr no ho—Wonuma dodowara na Asɔr no yɛ prɔmprɔm—Alma na Amulek kɔ Zarahemla. Bɛyɛ mfe 81 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamanfo sɛɛ Ammonihah no nkorɔfo no—Zoram dzi Nephifo enyim ma wokedzi Lamanfo do konyim—Alma nye Amulek nye binom so kã asɛmpa no—Wɔkyerɛkyerɛ dɛ Christ No Wusoɛr ekyir no, obeyi noho akyerɛ Nephifo no. Bɛyɛ mfe 81–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Mosiah ne mbabanyin nya nkɔnhyɛ nye nyikyerɛ sunsum—Wɔpaapaa hɔn mu na obiara fa no kwan dɛ ɔrokɔbɔ asɛm no dawur akyerɛ Lamanfo no—Ammon kɔ Ishmael asaase do na ɔbɛyɛ ɔhen Lamoni n’akowaa—Ammon gye ɔhen no nguankuw na oku n’atamfo wɔ Sebus esu ho. Nkyekyɛmu 1–3, bɛyɛ mfe 77 Ansaana wɔbɔwo Christ; nkyekyɛmu 4, bɛyɛ mfe 91–77 Ansaana wɔbɔwo Christ; nye nkyekyɛmu 5–39, bɛyɛ mfe 91 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ɔhen Lamoni susu dɛ Ammon nye Sunsum Kɛse no—Ammon kyerɛkyerɛ ɔhen no ndzɛmba a ɔfa Abɔdze ho, kwan a Nyankopɔn nye nyimpa nam do nye ɔpon no a ɔnam Christ mu ba—Lamoni gye dzi na ɔhwe ase dɛ ma oewu. Bɛyɛ mfe 90 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamoni ne nsa kã daapem nkwa kan no na ohu Ɔpomfo no—Ne fifo hɔn akra tɔɔ gon na pii huhuu abɔfo—Wɔkora Ammon do wɔ nwanwa kwan do—Onuma pii na ɔkyekyer asɔr wɔ hɔn mu. Bɛyɛ mfe 90 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ewuradze soma Ammon dɛ ɔnkɔ Midoni nkeyi n’enuanom no a wɔda efiadze no—Ammon na Lamoni hyia Lamoni n’egya, ɔno na ɔyɛ ɔmanhen wɔ asaase no nyina do—Ammon hyɛ ɔhen akɔkora no ma ɔpen do dɛ obeyi n’enuanom no efi efiadze. Bɛyɛ mfe 90 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Aaron kã Christ nye No Werdambɔ ho asɛm kyerɛ Amalekifo—Wɔdze Aaron na n’enuanom gu efiadze wɔ Middoni—Woyii hɔn n’ekyir no wɔkyerɛkyerɛ wɔ nhyiamudan no mu na wɔsakyer akra pii—Lamoni dze nyamesom ho fahodzi ma nkorɔfo a wɔwɔ Ishmael asaase do no. Bɛyɛ mfe 90–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Aaron kã Abɔdze, Adam n’Asehwe na ɔpon ho nhyehyɛɛ a ɔnam Christ mu ba ho asɛm kyerɛ Lamoni n’egya—Ɔmanhen no nye ne fifo nyina sakyer—Wɔkyerɛ mbrɛ wosi kyɛ asaase no mu ma Nephifo na Lamanfo no kyerɛ hɔn. Bɛyɛ mfe 90–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔbɔ nyamesom ho fahodzi ho dawur—Lamanfo a wɔwɔ nsaase esuon nye nkurow mu sakyer—Wɔfrɛ hɔnho Anti-Nephi-Lehifo na woyi hɔn fi ndom ase—Amalekifo nye Amulonfo pow nokwar no. Bɛyɛ mfe 90–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamanfo no ba Nyankopɔn no nkorɔfo no do—Anti-Nephi-Lehifo dzi dɛw wɔ Christ mu na abɔfo bɛsera hɔn—Wɔpɛ dɛ wowu kyɛn dɛ wɔbɔkõ agye hɔnho—Lamanfo pii so sakyer. Bɛyɛ mfe 90–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamanfo hɔn ntoabɔ no tserɛw—Noah n’asefo asɔfo no hera dɛ mbrɛ Abinadi hyɛ ho nkɔm no—Lamanfo pii sakyer na wɔkɛkã Anti-Nephi-Lehifo ho—Wɔgye Christ dzi na wodzi Moses mbra do. Bɛyɛ mfe 90–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ammon tuw noho wɔ Ewuradze mu—Ewuradze hyɛ agyedzifo dzen na ɔma hɔn nyimdzee—Nyimpa botum edua gyedzi do dze akra mpempem aba nnuho mu—Nyankopɔn wɔ tum nyina na adze nyina mu ntseasee. Bɛyɛ mfe 90–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ewuradze hyɛ Ammon dɛ ondzi Anti-Nephi-Lehifo enyim kan nkɔ bea a hɔyɛ dwudwoodwo—Ammon hyia Alma, onya enyigye mbordo ma n’ahom pa—Nephifo dze Jershon asaase no ma Anti-Nephi-Lehifo—Wɔfrɛ hɔn Ammon no nkorɔfo. Bɛyɛ mfe 90–77 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamanfo dzi ɔkogu wɔ ɔkõ huhu bi mu—Woku nyimpa ɔpepedu—Emumuyɛfo bɔkɔ mbusu a onnyi ewiei tsebew mu; na atseneneefo eenya enyigye a onnyi ewiei da. Bɛyɛ mfe 77–76 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma pɛ dɛ obenya abɔfo ndze dze akã nnuho ho asɛm—Ewuradze dze akyerɛkyerɛfo ma aman nyina—Alma tuw noho wɔ Ewuradze n’edwuma mu nye konyim a Ammon na n’enuanom edzi mu. Bɛyɛ mfe 76 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Korihor, Christ-otsiafo no, si Christ, Werdambɔ no, na nkɔnhyɛ sunsum no atwetwe—Ɔkyerɛkyerɛ dɛ Nyame, nyimpa asehwe, bɔn ho akatua na Christ biara nnyi hɔ—Alma gye dase dɛ Christ bɛba na ndzɛmba nyina kyerɛ dɛ Nyame wɔ hɔ—Korihor bisa asɛnkyerɛdze na otwa hwe famu na ɔtɔ mmum—Abɔnsam yi noho kyerɛ Korihor dɛ ɔbɔfo na ɔkyerɛ no dza ɔnkã—Wotsiatsia Korihor do na owu. Bɛyɛ mfe 76–74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma dzi asɛmpasomafo binom enyim ma wɔkɛgye Zoramfo a wɔahwe ase wɔ gyedzi mu no—Zoramfo pow Christ, wɔgye adzehun dzi, na wogyina mpaabɔ bi a wɔahyehyɛ ato hɔ do som—Sunsum Krɔnkrɔn hyɛ asɛmpasomafo mã—Enyigye a wɔwɔ no Christ mu men hɔn amandzehu. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma kyerɛkyerɛ abɔbɔfo no a hɔn amandzehu abrɛ hɔn adze no—Gyedzi nye enyidado wɔ adze a enyi nntua ho na eso ɔyɛ nokwar—Alma gye dase dɛ abɔfo som mbanyin, mbaa na mbofra—Alma dze asɛm no too aba ho—Ɔwɔ dɛ wodua na wogugu do nsu na wosiesie ho—Nna onyin yɛ dua na no do na wɔtsew onnyiewiei nkwa eduaba fi. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Zenos kyerɛkyerɛɛ dɛ ɔsɛ dɛ nyimpa bɔ mpaa na ɔsom wɔ mbea nyina do, na osian Ɔba no ntsi woeyi atsɛmbu efi hɔ—Zenock kyerɛkyerɛɛ dɛ osian Ɔba no ntsi, wɔdze ehumbɔbɔr ama—Moses ma Ɔba no ne ngyinahɔmadze do wɔ sar no do. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Amulek gye dase dɛ asɛm no wɔ Christ mu dze kɔ nkwagye mu—Sɛ werdambɔ ammba a nkyɛ adasamba nyina bɛhera—Moses mbra nyina kyerɛ Nyame ne Ba n’afɔrbɔ no—Onnyiewiei ɔpon ho nhyehyɛɛ no gyina gyedzi na nnuho do—Bɔ mpaa fa hwehwɛ honam nye sunsum mu nhyira—Nkwaber yi mu na ɔwɔ dɛ adasamba siesie hɔnho dze hyia Nyame kwan—Fa suro yɛ wo nkwagye ho edwuma wɔ Nyame enyim. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Asɛmpa ne kã sɛɛ Zoramfo no ndwuma bɔn no—Wɔpam hɔn a wɔasakyer no na wɔakɛka Ammon no nkorɔfo a wɔwɔ Jershon no ho—Osian nkorɔfo no hɔn emumuyɛ ntsi, Alma dzi yaw. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma gye ne nsakyeree no ho dase kyerɛ Helaman ekyir no a ohun ɔbɔfo no—Ohun amandze tse dɛ ɔkra a woebu no fɔ; ɔbɔ mpaa bɔ Jesus ne dzin, na nkyii Nyankopɔn wo no—Dɛw dɛɛdɛw hyɛ ne kra mã—Ohu abɔfo mpempem dɛ woriyi Nyankopɔn ayɛw—Nkorɔfo dodow a wɔasakyer no sɔe hwɛe na wohun dɛ mbrɛ ɔsɔe hwɛe na ohunii no. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔkora ayewa mprɛtse nye kyerɛwsɛm binom do dze aagye akra aba nkwagye mu—Osian Jaredfo hɔn emumuyɛ ntsi wɔsɛɛ hɔn—Ɔwɔ dɛ wɔdze hɔn nsumaamu nsewdzi na ahyɛmudzi suma nkorɔfo no—Enye Ewuradze ndwendwen biribiara a ebɛyɛ ho—Dɛ mbrɛ Liahona gyaa Nephifo no, dɛmara na Christ gye nyimpa kɔ onnyiewiei nkwa mu. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔtseetsee Shiblon wɔ tseneneeyɛ ho—Nkwagye wɔ Christ mu, ɔno a ɔyɛ wiadze nkwa na kan—Hom w’adwen mu nkã tse do. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ndwamambɔ yɛ ekyiwadze kɛse—Corianton no bɔn no maa Zoramfo anngye asɛm no—Christ ne ɔpon no wɔ hɔ ma nokwafo a wodzii ne kan no. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Christ dze owusoɛr brɛ adasamba nyina—Atseneneefo a woewuwu no kɔ paradise na emumuyɛfo no so kɔ ekyirekyir sum mu rokɔtweɔn hɔn wusoɛr da no—Wɔdze ndzɛmba nyina san anan mu dze hɔn akɔ hɔn tsebea a odzi mu no mu wɔ Owusoɛr no mu. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nyimpa benya enyigye a onnyi ewiei anaa awerɛhow a onnyi ewiei tsebew wɔ Owusoɛr no mu—Emumuyɛdze nnyɛ enyigyedze ara da—Hɔn a wɔyɛ honam ndwuma no nnyi Nyame wɔ wiadze yi mu—Nyimpa biara benya no su nye ndzɛmba a nna nkyɛ ɔwɔ no wɔ dɛm asetsena a ɔnnkye bo a yɛwɔ mu yi bio wɔ Nsanananmu. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Asetsena a ɔnnkye bo yi yɛ nsɔhwɛber ama nyimpa eetum enu noho na ɔasom Nyankopɔn—Asehwe no dze honam nye sunsum mu owu baa adasamba nyina do—Ɔpon nam nnuho do ba—Nyankopɔn Nankasa abɔ werdam dze ama wiadze bɔn—Ehumbɔbɔr wɔ hɔ ma hɔn a wonu hɔnho—Hɔn a wɔaka no nyina hyɛ Nyankopɔn ne pɛrpɛrdzi ase—Osian Werdambɔ no ntsi na ehumbɔbɔr ba—Nyia oenu noho nokwar mu no na wɔbɛgye no nkwa. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Alma na ne mbabanyin kã asɛm no—Zoramfo na Nephifo etuatsewfo binom bɛyɛ Lamanfo—Lamanfo tu Nephifo do sa—Moroni dze bambɔ ho akodze ma Nephifo—Ewuradze da nhyehyɛɛ a Lamanfo ayɛ edzi kyerɛ Alma—Nephifo bɔ hɔn efi, ahotɔ, ebusua ebusua na nyamesom ho ban—Moroni na Lehi nsordaafo twa Lamanfo ho hyia. Bɛyɛ mfe 74 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Moroni hyɛ Lamanfo dɛ wɔnye hɔn ndzi asomdwee ahyɛmu annyɛ dɛm a, wɔbɛsɛɛ hɔn—Zerahemnah pow nhyehyɛɛ no, na ɔkõ hyɛ ase bio—Moroni no nsordaafo dzi Lamanfo do konyim. Bɛyɛ mfe 74–73 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Helaman gye Alma ne nsɛm dzi—Alma hyɛ Nephifo nsɛɛe ho nkɔm—Ohyira na ɔdze ndom kã asaase no—Bi a Sunsum no faa Alma kɔr sor dɛ mbrɛ ɔfaa Moses no—Etuatsew soɛr asɔr no mu. Bɛyɛ mfe 73 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Amalickiah paam tsir do dɛ obedzi hen—Moroni ma fahotɔ mfrankaa do wɔ sor—Ɔkã nkorɔfo no boa ano ma wɔbɔ hɔn nyamesom ho ban—Wɔfrɛ agyedzifo mapa no Christianfo—Wɔbɔkora Joseph nkaa do—Amalickiah na etuatsewfo no guan kɔ Nephi asaase do—Woku hɔn a wɔpow dɛ wobosuo mu ma woenya fahodzi no. Bɛyɛ mfe 73–72 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Amalickiah dua kɔnkɔnsa, ewudzi na nsumaamu nhyehyɛɛ bɔn do bɛyɛ Lamanfo hɔn hen—Nephi etuatsewfo no yɛ emumuyɛfo na abɔyafo kyɛn Lamanfo no. Bɛyɛ mfe 72 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Amalickiah nunu Lamanfo no ma wotsia Nephifo—Moroni siesie no nkorɔfo ma wɔbɔ dza ɔma wɔyɛ Christianfo no ho ban—Odzi dɛw wɔ ahotɔ na fahodzi mu na ɔyɛ Nyame nyimpa ɔkokodurfo. Bɛyɛ mfe 72 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamanfo no a woetu sa no nntum mmfa Ammonihah na Noah nkurow a wɔabɔ ho ban no—Amalickiah paa Nyame na ɔkã ntam dɛ ɔbɔnom Moroni no bɔgyaa—Helaman na n’enuanom kɔ do hyɛ Asɔr no dzen. Bɛyɛ mfe 72 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Moroni bɔ Nephifo nsaase ho ban—Wɔkyekyer nkuropɔn fofor pii—Ɔkõ na ɔsɛɛ ba Nephifo do wɔ hɔn emumuyɛ na ekyiwadze nda no mu—Teancum dzi Morianton na no etuatsewfo do konyim—Nephihah wu na ne ba Pahoran bɛtsena atsɛmbu egua no do. Bɛyɛ mfe 72–67 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ahensifo no pɛ dɛ wɔsesã mbra no na wɔhyɛ ɔhen—Dɔm no fua Pahoran na fahodzifo no ekyir—Moroni hyɛ ahensifo no dɛ wɔmbɔ hɔn ahotɔ ho ban, annyɛ dɛm a woboku hɔn—Amalickiah nye Lamanfo no fa nkurow pii a wɔabɔ ho ban—Teancum san Laman akofo no na oku Amalickiah wɔ n’asese mu. Bɛyɛ mfe 67–66 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ammoron dzi Amalickiah n’adze na odzi Lamanfo do hen—Moroni, Teancum, na Lehi dzi Nephifo enyim ma wɔnye Lamanfo kõ dzi hɔn do konyim—Wɔsan gye Mulek kurow na woku Jacob, Zoramnyi no. Bɛyɛ mfe 66–64 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Wɔdze Laman adaduafo bɔ Dzifuu kuropɔn no ho ban—Etuatsew a osi Nephifo mu no dze Lamanfo hɔn konyimdzi ba—Helaman hwɛ Ammon no nkorɔfo no hɔn mberantsɛ a wɔyɛ nsordaafo mpemebien do. Bɛyɛ mfe 64–63 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ammoron na Moroni kã kwan a wɔbɛfa do asesã adaduafo ho asɛm—Moroni hwehwɛ dɛ Lamanfo bɔtwe hɔn nsordaafo ekyir na woegyaa hɔn yerɛyerɛw no yɛ—Ammoron hwehwɛ dɛ Nephifo dze hɔn akodze bogu famu na wɔabɛhyɛ Lamanfo ase. Bɛyɛ mfe 63 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Moroni pow dɛ ɔbɛsesa adaduafo—Wɔdze nsã daadaa Laman aweɔmfo no ma wɔbow, na woyi Nephi adaduafo no ma woguan—Wɔfa Gid kurow wɔ ber a wɔnnkã bɔgya biara nngu. Bɛyɛ mfe 63–62 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Helaman dze krataa kɛma Moroni kɛkã ɔkõ a wɔnye Lamanfo kõe no mu nsɛm kyerɛ no—Antipus na Helaman dzi konyim kɛse wɔ Lamanfo do—Helaman ne mberantsɛ mpemebien no dze tum nwanwa bi kõ na wonnku hɔn mu biara. Nkyekyɛmu 1, bɛyɛ mfe 62 Ansaana wɔbɔwo Christ; nkyekyɛmu 2–19, bɛyɛ mfe 66 Ansaana wɔbɔwo Christ; nye nkyenkyɛmu 20–57, bɛyɛ mfe 65–64 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Helaman kã Antiparah ne mfae nye hɔnho a wɔdze mae na ekyir no wɔkɔbɔ Cumeni ho ban ho asɛm—Ammon ne mberantsɛmba no kõ akokodur mu na wopirapira hɔn nyina na mbom wonnku obiara—Gid kã Lamanfo hɔn nkumii na Laman adaduafo hɔn nguanee ho asɛm. Bɛyɛ mfe 63 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Helam, Gid na Teomner fa nyansakwan bi do gye Manti kuropɔn no—Lamanfo twe san—Ammon no nkorɔfo hɔn mbabanyin no gyina pintsinn dɛ wɔdze robɔ hɔn ahotɔ na gyedzi ho ban. Bɛyɛ mfe 63–62 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Moroni kã kyerɛ Pahoran dɛ ɔmfa nsordaafo nkɔboa Helaman—Lamanfo fa Nephihah kuropɔn no—Moroni no bo fuw aban no. Bɛyɛ mfe 62 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Moroni hwinhwin Pahoran aban no dɛ oebu enyi egu nsordaafo no do—Ewuradze ma kwan ma woku atseneneefo—Nephifo no wɔ dɛ wɔdze hɔn tum nyina, na wɔfa kwan biara a wobotum do gye hɔnho fi hɔn atamfo nsa—Moroni hunahuna aban no dɛ sɛ ɔammfa mboa amma no nsordaafo no a, ɔbɛba no do nye no abɔkõ. Bɛyɛ mfe 62 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Pahoran kã mbrɛ nkorɔfo esi akã hɔnho abɔmu na wɔatsew aban no do etua ho asɛm kyerɛ Moroni—Ahensifo no fa Zarahemla na wɔnye Lamanfo yɛ kor—Pahoran serɛ nsordaafo a wɔbɔboa no ma ɔnye etuatsewfo no akõ. Bɛyɛ mfe 62 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Moroni si mu dɛ ɔrokɔboa Pahoran wɔ Gideon asaase do—Woku ahensifo no a wɔmmpɛ dɛ wɔbɔ hɔn man ho ban no—Pahoran na Moroni san gye Niphihah—Lamanfo pii bɛkã Ammon no nkorɔfo ho—Teancum ku Ammoron na woku no so—Wɔpam Lamanfo no fi asaase no do, na asomdwee ba—Helaman san bɛyɛ ɔsomdwuma no na ɔkyekyer Asɔr no. Bɛyɛ mfe 62–57 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Shiblon na ekyir no Helaman fa nkyerɛwee krɔnkrɔn no sie—Nephifo pii tu kwan kɔ asaase a ɔda etsifi no do—Hagoth pam hɛn a ɔkɔ po a ɔda anee afamu no do—Moronihah dzi Lamanfo do konyim wɔ ɔkõ mu. Bɛyɛ mfe 56–52 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Pahoran a otsĩa ebien no bɛyɛ ɔtsɛmbuafo panyin na Kishkumen ku no—Pacumeni bɛtsena atsɛmbu egua no do—Coriantumr bɛyɛ Lamanfo nsordaafo no hɔn sahen, ɔgye Zarahemla na oku Pacumeni—Moronihah dzi Lamanfo do konyim na ɔsan gye Zarahemla na woku Coriantumr. Bɛyɛ mfe 52–50 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Helaman, Helaman ne babanyin, bɛyɛ ɔtsɛmbuafopanyin—Gadianton bɛyɛ Kishkumen no kuw no ne panyin—Helaman no nkowaa ku Kishkumen, na Gadianton kuw no guan kɔ sar no do. Bɛyɛ mfe 50–49 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephifo pii guan kɔ asaase a ɔwɔ etsifi afamu no do—Wosisi adan pa na wɔdze kyerɛwsɛm pii sie—Wɔsakyer nyimpa mpem mpem na wonuma hɔn—Nyankopɔn n’asɛm gya nkorɔfo kɔ nkwagye mu—Helaman ne ba Nephi bɛtsena atsɛmbu egua no do. Bɛyɛ mfe 49–39 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephifo etuatsewfo na Lamanfo kã nsordaafo bɔmu na wɔgye Zarahemla asaase—Ɔnam Nephifo hɔn emumuyɛ ntsi wodzi ɔkogu—Asɔr no wodow na no mu nyimpa bɛyɛ mberɛw tse dɛ Lamanfo. Bɛyɛ mfe 38–30 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi na Lehi tu hɔnho si hɔ kã asɛmpa—Hɔn edzin kaa hɔn dɛ wɔnhwɛ hɔn edzikamfo ho mbɔ bra—Christ pon hɔn a wonu hɔnho—Nephi na Lehi sakyer nkorɔfo pii a wɔdze hɔn gu efiadze, na ogya twa hɔnho hyia—Fua kebii hyɛ nyimpa ahaebiasa do—Asaase wosow na ndze bi hyɛ hɔn dɛ wonnu hɔnho—Nephi na Lehi nye abɔfo twetwe nkɔmbɔ na ogya twa dɔmtutuw no ho hyia. Bɛyɛ mfe 30 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Lamanfo atseneneefo no kã asɛmpa no kyerɛ Nephifo emumuyɛfo no—Hɔn beenu nyina yɛ prɔmprɔm wɔ ber a nna wɔtse asomdwee na ndɔbaa pii mu—Lucifer, bɔn ne farbaa no, nunu emumuyɛfo no na Gadianton edwotwafo no akoma ma wodzi ewu na wɔyɛ emumuyɛdze pii—Edwotwafo no tu Nephi aban no gu. Bɛyɛ mfe 29–23 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nkorɔfo a wɔwɔ etsifi afamu no pow Nephi na ɔsan n’ekyir ba Zarahemla—okegyina abantsentsen a ɔwɔ no ture mu do bɔ mpaa na ɔse nkorɔfo no dɛ wonnu hɔnho annyɛ dɛm a wɔbɛhera. Bɛyɛ mfe 23–21 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Atsɛmbuafo esisifo per nunu nkorɔfo no ma wotsia Nephi—Abraham, Moses, Zenos, Zenock, Ezias, Isaiah, Jeremiah, Lehi na Nephi nyina gye Christ ho dase—Nephi nam nkenyan do bɔ ɔtsɛmbuafopanyin no ku ho nkaabɔ. Bɛyɛ mfe 23–21 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Asomafo kohu dɛ ɔtsɛmbuafopanyin no ewu da atsɛmbu egua no enyim—Wɔdze hɔn gu efiadze na ekyir no woyi hɔn—Nephi nam nkenyan do hu dɛ Seantum nye owudzifo no—Binom gye Nephi to mu dɛ ɔyɛ nkɔnhyɛnyi. Bɛyɛ mfe 23–21 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ewuradze dze nsɔwano tum ma Nephi—Wɔma no tum dɛ biribiara a ɔbɛkyekyer na obesan wɔ asaase do no wɔbɛyɛ no dɛmara wɔ sor—Ɔhyɛ nkorɔfo no dɛ wonnu hɔnho, annyɛ dɛm a wɔbɛhera—Sunsum no soa no fi nyimpadodow mu kɔ nyimpadodow mu. Bɛyɛ mfe 21–20 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi sũ frɛ Ewuradze dɛ ɔmfa ɔkɔm mbɛhyɛ hɔn akodzi no ananmu—Nyimpa pii hera—Wonu hɔnho na Nephi serɛ Ewuradze dɛ ɔmma nsu ntɔ—Nephi na Lehi nya nyikyerɛ pii—Gadianton edwotwafo no gyee ndwow wɔ asaase no do. Bɛyɛ mfe 20–6 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nyimpa nnsi pi na wɔyɛ nkwaseadze na wɔnnkyɛr bɔn yɛ—Ewuradze tsẽa No nkorɔfo—Wɔdze adasamba a wɔnnsɛ hwee to Nyankopɔn no tum ho—Atsɛmbu da no nyimpa benya daapem nkwa anaa daapem afɔbu. Bɛyɛ mfe 6 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Samuel, Lamannyi no hyɛ nkɔm dɛ sɛ Nephifo no ennu hɔnho a wɔbɛsɛɛ hɔn—Ndom kã hɔn nye hɔn ahodze—Wɔpow nkɔnhyɛfo no na wosiw hɔn abo, mbɔnsam twa hɔnho hyia na hɔn enyi gye emumuyɛdze ho. Bɛyɛ mfe 6 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Samuel hyɛ nkɔm dɛ wɔ Christ n’awoo no anafua no bɛyɛ kan na woraba fofor bopue—Christ pon adasamba fi honam na sunsum mu owu mu—No wu ho nsɛnkyerɛdze no mu bi nye sum kebii ndaansa, mbotan mpaapaae, na nsakyer kɛse a ɔbɛba asaase do awerɛfir mu. Bɛyɛ mfe 6 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Ewuradze tsẽaa Nephifo osiandɛ Ɔdɔ hɔn—Lamanfo a wɔsakyeree no gyina pintsinn wɔ gyedzi mu—Ewuradze bohu Lamanfo mbɔbɔr wɔ nda a odzi ekyir no mu. Bɛyɛ mfe 6 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi numa Nephifo a wɔgye Samuel dzi no—Nephifo no a wonnuu hɔnho no nntum mmfa hɔn egyen na abo nnku Samuel—Binom pirim hɔn akoma na binom so hu abɔfo—Ekyingyefo no se dɛ onnkehia dɛ wɔbɛgye Christ nye Ne Jerusalem mbaa no edzi. Bɛyɛ mfe 6–1 Ansaana wɔbɔwo Christ.
Nephi, Helaman ne babanyin no, fi asaase no do kɔ na ne babanyin Nephi dze nkyerɛwee no sie—Ɔwɔ mu dɛ nsɛnkyerɛdze nye anwanwadze sisi, eso emumuyɛfo no hyehyɛ dɛ woboku atseneneefo no—Anafua no a wɔbɔwo Christ wɔ mu no du—Woyi asɛnkyerɛdze kyerɛ na woraba fofor pue—Atorsɛm na ndaadaa kɔ do pii, na Gadianton n’edwotwafo no ku nyimpa pii. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 1–4.
Emumuyɛdze na ebusudze pii soɛr wɔ nkorɔfo no mu—Nephifo nye Lamanfo yɛ kor dze tsia Gadiaton edwotwafo no—Lamanfo a wɔasakyer hɔn no bɛyɛ fitaa na wɔfrɛ hɔn Nephifo. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 5–16.
Giddianhi, Gadianton ɔkandzifo no hwehwɛ dɛ Lachoneus na Nephifo no begyaa hɔnho nye hɔn nsaase mu ama—Lachoneus yɛ Gidgiddoni nsodaafo no hɔn ɔsahen—Nephifo no hyia Zarahemla na Dzifuu dɛ worobɔkõ dze abɔ hɔnho ban. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 16–18.
Nephifo nsordaafo dzi Gadianton edwotwafo no do konyim—Woku Giddianhi, nye n’abadziekyir, Zemnarihah a, wɔsɛn no—Nephifo yi Ewuradze ayɛw wɔ hɔn konyimdzi ntsi. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 19–22.
Nephifo no nu hɔnho na woyi hɔn bɔn akwa—Mormon kyerɛw no nkorɔfo no ho abakɔsɛm na ɔbɔ daapem asɛm no ho dawur kyerɛ hɔn—Wɔbɛkã Israel mba a wɔabɔ hɔn apetse mber pii no aboa ano. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 22–26.
Nephifo no yɛ prɔmprɔm—Ahantan, ahonya na nyimpa mu nyiyimu soɛr—Etuatsew paapaa Asɔr no mu—Satan dzi nkorɔfo no enyim ma wɔtsew etua wɔ bagua mu—Nkɔnhyɛfo pii kã nnuho ho asɛm na woku hɔn—Hɔn ewudzifo no yɛ kor dɛ wobotu aban no egu. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 26–30.
Woku ɔtsɛmbuafopanyin no, wotu aban no na nkorɔfo no kyekyɛ hɔn mu mbusuakuw—Jacob, Christ ne tsiafo no, bɛyɛ nsumaamu fɛkuw bi do hɔn hen—Nephi kã nnuho nye gyedzi a ɔwɔ dɛ nyimpa nya wɔ Christ mu ho asɛm—Abɔfo bɔsom no dabiara, na onyan no nua fi ewufo mu—Pii nu hɔnho na wonuma hɔn. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 30–33.
Ehum kɛse, asaasewosow, ogya, ekyinehyia mframa nye anwanwadze a osisi nyina gye Christ ne mbeamudua mu bɔ ho dase—Wɔsɛɛ nyimpa pii—Sum hyɛ asaase do ndaansa—Hɔn a wɔka no twa kwadwom wɔ hɔn nkrabea ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 33–34.
Christ ne ndze fi sum mu tsẽa mu kã nyimpa na nkuropɔn pii hɔn nsɛe ho asɛm osian emumuyɛdze ntsi—Ɔtsẽa mu kã No nyamesu ho asɛm, Ɔkã dɛ Moses mbra no ahyɛ mã, na Ɔto nsa frɛ nyimpa dɛ wɔmbra No hɔ ma ɔngye hɔn nkwa. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Asaase do taa dzinn bɛyɛ ndɔnhwer pii ntamu—Christ Ne ndze bɔ anohoba dɛ Ɔbɔboaboa No nkorɔfo ano dɛ mbrɛ akokɔ baatan boaboa ne mba ano—Hɔn a wɔyɛ atseneneefo ara yie wɔ nkorɔfo no mu no na wɔakora hɔn do no. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34–35.
Egya no dzi Ne Dɔba no ho dase—Christ pue na Ɔbɔ No Werdambɔ no ho dawur—Nyimpadodow dze hɔn nsa kã epirakur a ɔwɔ Ne nsa na N’anan ho nye Ne mfemu no—Wɔtsẽatsẽa mu dɛ Hosanna—Ɔkyerɛ kwan na ma mbrɛ wonsi nnuma—Wentwiwentwi sunsum fi abɔnsam—Christ Ne nkyerɛkyerɛ nye dɛ ɔsɛ dɛ adasa nya gyedzi na wonuma hɔn na hɔn nsa kã Sunsum Krɔnkrɔn no. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus frɛ esuafo duebien na ɔkyerɛ hɔn dwuma a ɔsɛ dɛ wodzi—Ɔkã kasa a ɔtse dɛ Bepɔw do Asɛmpa no kyerɛ Nephifo no—Ɔkã Nhyira nsɛm no—Ne nkyerɛkyerɛ no tra na onya gyinabew sen Moses mbra no—Ɔhyɛ adasa dɛ wondzi mu tse dɛ mbrɛ Ɔno na N’Egya dzi mu no—Fa to Matthew tsir 5 ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus kyerɛkyerɛ Nephifo no Ewuradze Asɔr no—Ɔwɔ dɛ wɔpɛ hɔn akoradze gu sor—Wɔhyɛ esuafo duebien no dɛ mma wɔnndwendwen honam afamu ndzɛmba ho wɔ hɔn somdwuma mu—Fa to Matthew tsir 6 ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus se: Mma hom mmbu atsɛn, hom mbisa Nyame, hom nhwɛ yie wɔ nkɔnhyɛfo atorfo ho—Ɔdze nkwagye bɔ hɔn a wɔyɛ Egya ne pɛ no anohoba—Fa to Matthew tsir 7 ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus kã dɛ Moses mbra no ahyɛ mã wɔ No mu—Nephifo nye nguan nkaa no a Ɔkãa ho asɛm wɔ Jerusalem no—Osian emumuyɛ ntsi Ewuradze No nkorɔfo a wɔwɔ Jerusalem no nnyim Israel nguan a wɔabɔ hɔn apetse no. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus bɔkɔ akɛsera Israel nguan binom a wɔayew no—Nda a odzi ekyir no asɛmpa no bɔkɔ Amanamamfo na nkyii Israel fifo hɔ—Ewuradze No nkorɔfo bohu; enyiwa tua enyiwa ber a Ɔdze Zion bɛba bio no. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus se no nkorɔfo dɛ wɔndwendwen Ne nsɛm ho na wɔmbɔ mpaa mbisa ntseasee—Ɔsa hɔn ayarfo yarba—Ɔdze kasa a obiara nntum nnkyerɛw bɔ mpaa ma nkorɔfo no—Abɔfo bɔsom hɔn na ogya twa hɔn mbofra ho hyia. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus dze sacrament no bɔbɔ adze wɔ Nephifo mu—Ɔhyɛ hɔn dɛ wɔmbɔ mpaa daa wɔ Ne dzin mu—Wobobu hɔn a hɔnho nntsew na wodzi No honam na wɔnom No bɔgyaa no fɔ—Wɔma esuafo no tum dɛ wɔmfa Sunsum Krɔnkrɔn no mma. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Esuafo duebien no som nkorɔfo no na wɔbɔ mpaa dze bisa Sunsum Krɔnkrɔn no—Wonuma esuafo duebien no na hɔn nsa kã Sunsum Krɔnkrɔn no, na abɔfo hɔn som—Jesus dze kasa bi bɔ mpaa a wonntum nnkyerɛw—Ɔgye dase wɔ Nephifo hɔn gyedzi kese ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus ma paanoo nye wenyin puee hɔ nwanwa mu ara na ohyira no sacrament no do ma nkorɔfo—Jacob n’asefo bɛba ebenya Ewuradze hɔn Nyankopɔn noho nyimdzee na wɔbɛtsena America asaase tɔw no do—Jesus yɛ nkɔnhyɛnyi tse dɛ Moses, na Nephifo yɛ nkɔnhyɛfo hɔn mba—Wɔbɔboaboa Ewuradze no nkorɔfo nkaafo no ano dze hɔn akɔ Jerusalem. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Sɛ Mormon Nwoma no pue a wɔbɔboaboa Israel ano—Amanamamfo betsim wɔ America dɛ fahodzifo—Sɛ wɔgye dzi na wɔyɛ setsie a wɔbɛgye hɔn nkwa; annyɛ dɛm a wobotwa hɔn akyen na wɔasɛɛ hɔn—Israel bɛkyekyer Jerusalem fofor no, na ebusuakuw a wɔayew no bɛsan aba. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Wɔbɛkyekyer Zion nye ne stake nyina wɔ nda a odzi ekyir no mu, na wɔnam ehumbɔbɔr na tsema do bɔboaboa Israel ano—Wobedzi konyim—Fa to Isaiah 54 ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus gye Isaiah ne nsɛm no to mu—Ɔhyɛ nkorɔfo no dɛ wɔnhwehwɛ nkɔnhyɛfo no—Wɔdze Samuel, Lamannyi no ne nsɛm a ɔfa Owusoɛr ho no kã hɔn nkyerɛwee ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Ewuradze no bɔfoe besiesie kwan no dze ama Mbae a Otsĩa Ebien no—Christ bɛtsena atsɛmbu mu—Wɔhyɛ Israel dɛ ontua ebupɛn du na ɔmbɔ afɔr—Wɔkyerɛɛw nkaa nwoma to hɔ—Fa to Malachi 3 ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Mbae a Otsĩa Ebien no wɔbɛhyew ahopɔwfo nye emumuyɛfo dɛ eburonan—Elijah bɛsan aba ansaana dɛm da kɛse a ɔyɛ hu no aba—Fa to Malachi 4 ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus siansian ndzɛmba nyina mu fi ahyɛse kesi ewiei—Mbɔdomaba na mbofra kã anwanwasɛm bi a obiara nntum nnkyerɛw—Hɔn a wɔwɔ Christ N’Asɔr mu no ndzɛmba nyina bɛyɛ kwasafodze. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34.
Jesus hyɛ hɔn dɛ wɔmfa Ne dzin mfrɛ Asɔr no—Ne dwumadzi na ne werdam afɔrbɔ no na wɔbɔmu yɛ N’asɛmpa no—Wɔhyɛ adasamba dɛ wonnu hɔnho na wonuma hɔn ama Sunsum Krɔnkrɔn no aatsew hɔnho—Ɔwɔ dɛ wɔyɛ dɛ mbrɛ Jesus noara tse. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34–35.
Esuafo duebien no mu baakron pɛ na wɔbɔ hɔn anohoba dɛ sɛ wowu a wobenya egyapadze wɔ Christ n’ahenman no mu—Nephifo Baasa no pɛ na wɔma hɔn tum wɔ owu do ama wɔaatsena asaase yi do ekodu dɛ Jesus bɛba bio—Wɔmaa hɔn do kɔr sor hɔ ma wohu ndzɛmba a ɔnnsɛ dɛ wɔdze ano kã, na seseiara wɔrosom wɔ adasa mu. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34–35.
Mormon Nwoma no mpuei no yɛ asɛnkyerɛdze a ɔkyerɛ dɛ Ewuradze ahyɛ ase roboaboa Israel ano na N’Ahyɛmu so rehyɛ mã—Wɔdze ndom bɛkã hɔn a wɔpow Ne nda a odzi ekyir mu nyikyerɛ na akyɛdze no. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34–35.
Wɔhyɛ Amanamamfo a wɔwɔ nda a odzi ekyir yi mu dɛ wonnu hɔnho na wɔmbra Christ hɔ na wɔnkan hɔn mfora Israel fifo. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 34–35.
Nephifo nye Lamanfo nyina nya nsakyer ba Ewuradze hɔ—Hɔn ndzɛmba nyina bɛyɛ kwasafodze, wɔyɛ anwanwadze na wɔyɛ prɔmprɔm wɔ asaase no do—Mfe ahaebien ekyir no mpaapaamu, ndzeyɛbɔn, asɔrasɔr atorfo na atseetsee soɛr—Mfe ahaebiasa ekyir no Nephifo nye Lamanfo nyina bɛyɛ emumuyɛfo—Ammaron dze kyerɛwsɛm krɔnkrɔn no sie. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 35–321.
Ammaron kã nkyerɛwee krɔnkrɔn no ho asɛm kyerɛ Mormon—Ɔkõ si Nephifo na Lamanfo no ntamu—Woyi Nephifo baasa no kɔ—Emumuyɛ, ekyingye, nkɔngyaayi nye abayisɛm tahye. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 321–326.
Mormon yɛ Nephi nsordaafo no hɔn banodzifo—Bɔgya na ewudzi twuuw fa asaase no do—Nephifo twa kwadwom na wosi nkrum dɛ afɔdzifo hɔn awerɛhodzi—Hɔn adom nda etwa mu—Mormon nya Nephi ne mprɛtse no—Akõkoekõ toa do. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 327–350.
Mormon bɔ nnuho ho dawur kyerɛ Nephifo no—Wodzi konyim kɛsenara na wɔhyɛ hɔnho enyimnyam wɔ hɔnankasa hɔn mbɔdzembɔ do—Mormon pow dɛ ɔbɛyɛ hɔn banodzifo, ɔbɔ mpaa a gyedzi nnyi mu ma hɔn—Mormon Nwoma no to nsa frɛ Israel ebusuakuw duebien no dɛ wɔngye asɛmpa no ndzi. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 360–362.
Ɔkõ nye ewudzi kɔ do—Emumuyɛfo twe emumuyɛfo aso—Emumuyɛdze kɛse tahye sen dza esi pɛn wɔ Israel mu nyinara—Wɔdze mbaa na mbofra bɔ afɔr ma abosom—Lamanfo no hyɛ ase dɛ wɔrepra Nephifo no efi hɔn enyim. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 363–375.
Mormon dzi Nephifo hɔn nsordaafo no enyim kɔ akõ dzendzen bi mu bio a wɔkã bɔgyagu na ewudzi kɛse—Mormon Nwoma no bopue na ɔbɛma Israelfo nyina agye edzi dɛ Jesus nye Christ no—Osian Lamanfo no hɔn enkyingye ntsi, wɔbɔbɔ hɔn apetse, na Sunsum no begyaa dɛ ɔnye hɔn ridzi aper—Hɔn nsa bɛkã asɛmpa no efi Amanamamfo hɔ wɔ nda a odzi ekyir no mu. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 375–384.
Nephifo no boa hɔn ano wɔ Cumorah asaase do dɛ wɔrobɔkɔ sa a odzi ewiei—Mormon dze nkyerɛwee krɔnkrɔn no suma koko Cumorah mu—Lamanfo no dzi konyim, na wɔsɛɛ Nephifo hɔn man no—Hɔn mu mpempem na wɔdze nkrantsee kum hɔn. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 385.
Mormon to nsa frɛɛ Lamanfo a wɔwɔ nda a odzi ekyir no mu no dɛ wɔngye Christ ndzi, wɔngye N’asɛmpa no nto mu na wɔngye hɔn nkwa—Hɔn a wɔgye Bible dzi nyina bɛgye Mormon Nwoma no so edzi. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 385.
Lamanfo no per hwehwɛ na wɔsɛɛ Nephifo no—Wɔnam Nyankopɔn no tum do beyi Mormon Nwoma no epue—Mpaa bɛba hɔn a wɔnam ebufuhyew na aperdzi do tsia Ewuradze n’edwuma no—Nephifo hɔn kyerɛwsɛm no bopue wɔ da a emumuyɛdze, ɔsɛɛ na gyedzi ho asehwe bɛba. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 400–421.
Moroni frɛ hɔn a wɔnngye Christ nndzi no dɛ wonnu hɔnho—Ɔbɔ Nyame a ɔyɛ anwanwadze, nyia ɔma nyikyerɛ na ohue akyɛdze na nsɛnkyerɛdze gu nokwardzifo do no ho dawur kyerɛe—Anwanwadze dwumadzi gyaa osian ekyingye ntsi—Nsɛnkyerɛdze dzi agyedzifo ekyir—Wotu adasamba fo dɛ wɔnyɛ enyansafo na wondzi mbrasɛm no do. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Moroni twitwa Ether ne nsɛm do yɛ no ntsiantsia—Wɔdze Ether n’ebusuasantsen to gua—Jaredfo kasaa anntõtõ wɔ Babel Abantsentsen no ho—Ewuradze bɔ hɔn anohoba dɛ obegya hɔn akɔ asaase a ɔasan mu eyi ama hɔn do na ɔayɛ hɔn ɔman kɛse.
Jaredfo boaboa hɔnho dɛ wobotu hɔn kwan akɔ anohoba asaase do—Ɔyɛ asaase a wɔasan mu eyi a ɔwɔ dɛ nyimpa a wɔwɔ do no som Christ annyɛ dɛm a, wobotwa hɔn efi do—Ewuradze kasa kyerɛ Jared no nuabanyin ndɔnhwer ebiasa—Jaredfo no pam ahɛn—Ewuradze kasa kyerɛ Jared no nua dɛ ɔnkyerɛ dza ɔnyɛ a ɔbɛma kan aba hɛn no mu.
Jared no nuabanyin hu Ewuradze Ne nsatseaba dɛ Ɔdze rekã abo duesia no—Christ yi No sunsum bɔbea kyerɛ Jared no nuabanyin—Hɔn a wɔwɔ nyimdzee a odzi mu no biribiara nnkesiw hɔn kwan dɛ wɔbɛhɛn ntwamutam no mu—Wɔdze asekyerɛdze ma wɔdze Jared ne nsɛm no epue kan mu.
Wɔhyɛ Moroni dɛ ɔnsɔw Jared no nuabanyin ne nkyerɛwee no ano—Wɔnnkɛda no edzi ekodu dɛ nyimpa benya gyedzi a ɔtse dɛ Jared no nuabanyin nedze no—Christ hyɛ nyimpa dɛ wɔngye Ɔno nye N’esuafo no nsɛm ndzi—Wɔhyɛ nyimpa dɛ wonnu hɔnho na wɔngye asɛmpa no ndzi na wɔngye hɔn nkwa.
Adasefo baasa na edwuma no nankasa begyina hɔ dɛ dasegye wɔ Mormon Nwoma no nokwardzi ho.
Mframa dze Jaredfo hɔn ahɛn no kodwir anohoba asaase no do—Nkorɔfo no yi Ewuradze ayɛw wɔ Ne papayɛ ho—Woyi Orihah ma ɔbɛyɛ ɔhen wɔ hɔn do—Jared na no nuabanyin wu.
Orihah dzi hen wɔ tseneneeyɛ mu—Wɔnam basabasayɛ na aperdzi do si Shule ahenman na Cohor ahenman a wɔyɛ akorafo no—Nkɔnhyɛfo kasa tsia nkorɔfo no hɔn emumuyɛdze na abosonsom, ekyir no wonu hɔnho.
Aperdzi na wentwiwentwi si ahenman no ho—Akish tsew nsumaamu nsewdzi fɛkuw dɛ ɔdze rukoku ɔhen no—Nsumaamu fɛkuw fi abɔnsam na no nsunsuando nye aman hɔn nsɛe—Wɔbɔ nkyirmba Amanamamfo kɔkɔ wɔ nsumaamu fɛkuw a ɔbɛper dɛ obotu fahodzi a ɔwɔ asaase, amanaman na nkurow nyina mu egu ho.
Ahenman no nam adzedzi do, apam bɔn na ewudzi kwan do fi nyimpa kor do kɔ kor so do—Emer hu Tseneneenyi ne Ba no—Nkɔnhyɛfo pii kã nnuho ho asɛm—Ɔkɔm nye mbowatsena a wɔwɔ bɔr bɛsɛɛ nkorɔfo no.
Ɔhen kor dzi kor n’adze—Ahemfo no binom yɛ atseneneefo; na binom so yɛ emumuyɛfo—Sɛ ndzeyɛtsenenee tahye a, Ewuradze hyira hɔn na ɔyɛ hɔn prɔmprɔm.
Akodzi, etuatsew na emumuyɛdze gye ntaa wɔ Jaredfo abrabɔ mu—Nkɔnhyɛfo hyɛ nkɔm dɛ, sɛ woennu hɔnho a, wɔbɛsɛɛ Jaredfo no korakora—Nkorɔfo no pow nkɔnhyɛfo no nsɛm.
Nkɔnhyɛnyi Ether tu nkorɔfo no fo dɛ wɔngye Nyankopɔn ndzi—Moroni kã anwanwadze na ahobowdze a gyedzi yɛ ho asɛm—Gyedzi ma Jared no nuabanyin hu Christ—Ewuradze ma adasamba yɛ mberɛw ama wɔaabrɛ hɔnho adze—Jared no nuabanyin nam gyedzi do tutu Bepɔw Zerin—Gyedzi, enyidado, na ayamuyie hia ma nkwagye—Moroni hun Jesus enyim na enyim.
Ether kã Jerusalem Fofor a Joseph n’asefo bɛkyekyer wɔ America no ho asɛm—Ɔhyɛ nkɔm, wɔpaam no, ɔkyerɛw Jared ho abakɔsɛm, na odzi kan kã Jaredfo hɔn nsɛe ho asɛm—Ɔkõ soɛr wɔ asaase nyinara do.
Nkorɔfo no hɔn emumuyɛ dze ndom ba asaase no do—Coriantumr nye Gilead, nye Lib, na Shiz dzi akõ—Bɔgya na ewudzi kata asaase no do.
Woku Jaredfo ɔpepe wɔ ɔkõ mu—Shiz na Coriantumr kã nkorɔfo nyina boa ano dɛ worikedzi akõ atɔr—Ewuradze no Sunsum gyaa dɛ ɔnye hɔn dzi aper—Wɔbɔ Jaredman no korakora—Coriantumr nko ka.
Moroni kyerɛw wɔ Lamanfo hɔn yieyɛ ntsi—Nephifo a wɔammpen dɛ wɔbɔpow Christ no woku hɔn. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Jesus maa Nephifo esuafo duebien no tum dɛ wɔmfa Sunsum Krɔnkrɔn n’akyɛdze no mma. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Elderfo dze nsa gu do hyɛ asɔfo na akyerɛkyerɛfo. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Mbrɛ elderfo na asɔfo si hyira sacrament paanoo do no, wɔkyerɛkyerɛ mu. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Wɔkyerɛ kwan a wɔfa do hyira sacrament wenyin do. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Wonumaa nkorɔfo a wonuu hɔnho no na wɔbɛkã fɛkuw no ho—Wɔdze asɔrmba no a wonuu hɔnho no hɔn bɔn kyɛ hɔn—Wɔnam Sunsum Krɔnkrɔn no tum do hwɛ ehyiadzi do. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Wɔto nsa frɛ dɛ wɔmbɛhɛn Ewuradze n’ahomgye mu—Pra w’akoma mu bɔ mpaa—Christ no Sunsum boa nyimpa ma woyi papa fi bɔn ho—Satan daadaa nyimpa ma wɔpow Christ na wɔyɛ bɔn—Nkɔnhyɛfo no da Christ ne mbae no edzi—Wɔnam gyedzi do yɛ anwanwadze na abɔfo bɔsom—Ɔsɛ dɛ nyimpa nya onnyiewiei nkwa ho enyidado na ɔyɛ ayamuyie. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Mbofra nkakraba enuma yɛ bɔn mu ekyiwadze kɛse—Osian Werdambɔ no ntsi mbofra nkakraba tse nkwa mu wɔ Christ mu—Gyedzi, nnuho, ɔdwe na botooyɛ akoma, Sunsum Krɔnkrɔn ne nya na ibetsim ekodu ewiei no na ɔdze nyimpa kɔ nkwagye mu. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401–421.
Nephifo na Lamanfo nyina asekyɛw na wɔayew hɔn enyibuei—Wɔyɛ hɔnho ayakayakadze na wodzi hɔnho ewu—Mormon bɔ mpaa dɛ adom na papayɛ nkã Moroni afebɔɔ. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 401.
Mormon Nwoma no ho dasegye nam Sunsum Krɔnkrɔn no tum do ba—Wɔdze Sunsum n’akyɛdze no ma agyedzifo—Sunsum akyɛdze no nye agyedzifo nantsew daa—Moroni ne nsɛm kasa fi huntuma mu—Hom mbra Christ hɔ, hom ndzi mu wɔ No mu, na hom ntsew hom akra ho. Christ N’Awoo ekyir bɛyɛ mfe 421.